Qaabka ay u socoto codeynta xubnaha aqalka sare ee puntland iyo sida loo kala guulaystay – STAR FM SOMALIA
Qaabka ay u socoto codeynta xubnaha aqalka sare ee puntland iyo sida loo kala guulaystay
Kuriga 1aad: Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya,Cumar Cabdirashiid Cali Sharma’arke oo xilku uu ka dhammaaday ayaa ku guuleystay xubinnimadda Aqalka Sare ee Barlamaanka federaalka Soomaaliya oo u ku matali doono dowlad-gobolleedka Puntland,
Cumar ayaa 47 cod kaga guulaystay gabadhii la tartamaysay ee Aamino Axmed Cabdullaahi,sida uu ku dhawaaqay guddoomiyaha baarlamaanka Puntland,Axmed Cali Xaashi -wuxuu guddoomiyu sheegay in musharaxad Aamino Cabdulaahi oo la tartamaysay Cumar Cabdirashiid ay heshay 17 cod, Waxaana xumaaday hal Cod.
65 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka Puntland ayaa maanta ka qayb-galay cod dhiibayashada xubnaha u sharraxan Aqalka sare -waxaana baarlamaanka uu ka kooban-yahay 66 xildhibaan.
Sharma’arke wuxuu noqonayaa musharixii kowaad ee ku guulaystay xubinimadda Aqalka Sare ee baarlamaanka federaalka, isagoo matalaya deegaannada Puntland.
Kursiga 2aad: Madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Faroole ayaa isna ku guulaystay kursigii labaad ee aqalka sare kadib codayn ka dhacday hoolka Baarlamaanka Puntland.
Cabdiraxmaan Shiikh Maxamed Maxamuud Faroole ayaa la tartamayey Cabdimahdi Abshir Cismaan.
Cabdiraxmaan Faroole waxaa uu helay codad dhan 59 cod Cabdimahdina waxaa uu helay 5 cod waxaana xumaaday 1 cod waxaa sidaas ku dhawaaqay gudoomiyaha guddiga doorashada Puntland Saadiq Abshir Garaad.
Kursiga 3aad: Xunbinta sedexaad ee aqalka sare Puntland ayaa waxaa ku guulaystay Prof Cabdirisaaq Xasan Cismaan Juurile waxaana uu helay 33 cod.
Hodan Ismaaciil Cilmi oo la tartamasay Prof. Juurile ayaa iyaduna heshay 32 cod waxaana looga guulaystay 1 cod.
Doorashada Juurile iyo Hodan ayaa noqotay doorashadii ugu xiisaha badnayd maadaama lagu kala guulaystay cod hal dheeri ah.
Kursiga 4aad: Cali Ismaaciil Cabdi Giir iyo Farxaan Cali Xuseen ayaa ku tartamay kurisga afraad ee aqalka sare Baarlamaanka Soomaaliya u matalaya Puntland.
Farxaan Cali Xuseen ayaa ku guulaystay xubinta aqalka waxaana uu kaga guulaystay Cali Ismaaciil Cabdi Giir oo kursigaas kula tartamayey.
Farxaan Cali Xuseen ayaa helay codad gaaraya 36 cod Cali Ismaaciil Cabdi Giir wuxuu helay 29 cod waxaana natiijada ku dhawaaqay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban ee heer federal.
Kursiga 5aad: Cabdisalaan Xaaji Maxamuud Dheere iyo Faarax Cawad Jaamac ayaa ku tartamay kursiga shanaad ee aqalka sare oo maanta ka dhacay magaalada Garoowe.
Cabdisalaan Xaaji Maxamuud Dheere ayaa ku guulaystay xubinta shanaad ee Baarlamaanka aqalka sare uga mid noqonaya Puntland waxaana uu kaga guulaystay tartanka Faarax Cawad Jaamac.
Cabdisalaan Xaaji Maxamuud Dheere ayaa helay codad gaaraya gaaraya 40 codka Faarax Cawad Jaamac waxaa uu helay 25 cod waxaana natiijada ku dhawaaqay Siciid Jaamac Qoorsheel oo gudoomiyaha guddiga doorasha heer federal ee Puntland.
Kursiga 6aad: Mahad Daahir Shiikh Nuur iyo Cabdixakiin Axmed Xaashi ayaa ku tartamay kursiga 6-aad ee aqalka sare doorashadii maantay ka dhacday Magaalada Garoowe.
Mahad Daahir Shiikh Nuur ayaa helay codad gaaraya 36 cod halka Cabdixakiin Axmed Xaashi uu helay 28 cod waxaana xumaaday hal cod sida uu ku dhawaaqay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban ee heer federal Qoorsheel.
Xildhibaanada baarlamaanka Puntland ayaa dooranaya 11 xubnood ee aqalka sare ee baarlamaanka Federalka u matali doona Puntland.
Kursiga 7aad: Kursiga Todobaad ee aqalka sare ee Baarlamaanka Federalka u matalaya Puntland ayaa waxaa ku tartamay Hodan Maxamuud Cismaan iyo Basro Cumar Geele.
Hodan Maxamuud Cismaan ayaa heshay codad gaaraya 35 cod Basro Cumar Geedina waxaa ay heshay 30 cod sida uu ku dhawaaqay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban ee heer federalka Qoorsheel.
Waxaa la soo gaba gabeeyey codentii xubnaha aqlka sare ka socotay magaalada garawe(Daawo Sawirada)
Madaxweynaha Hirshabelle oo maanta gaaray Magaalada Baledweyne(Daawo Sawirada)